Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 8, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kana zvasvika pakunyora, iwe zvechokwadi unowana kushushikana kwakapararira. Asi nhasi haugone kubatsira asi kunyora. Pane kudaro, kunyora kuri pachena. Nekudaro, hazvisi nyore nguva dzose kunyora chaizvo izvo zvaunoda kutaura. Kunzwisiswa pasina kujeka uye kusarudza mazwi akakwana zvinotora ruzivo.
Kusiyana nekutaura, izvo zvinouya zvega kwatiri mazuva ese, kunyora haisi nzira yekuzvarwa. Kunyora kuchiri kuomera vanhu vazhinji, nekuti kazhinji unenge uri wega une peji risina chinhu, ndiwe wega wekuziva mhedzisiro yaunoda. Kunyora saka kunotyisa; kutya nekuda kwekushaikwa kwehunyanzvi hwekunyora. Tichifunga nezvezvinosiiwa nemunhu paanenge achinyora, vanotya kusiya zvisina kunaka, izvo zvinogona kuve njodzi.
Kunyora kuisa pachena pamberi pevamwe
Nokuzviratidza kuburikidza nekunyora, « tinozvifumura pachedu, tinotora mukana wekupa mumwe iwo mufananidzo usina kukwana wedu […] ". Mibvunzo yakawanda kwazvo inomuka yatinowanzoedza kupindura: Ndiri kunyora nemazvo here? Ini ndakanyora chaizvo zvandinoda kuratidza? Vaverengi vangu vachanzwisisa zvandanyora here?
Ikozvino uye kunoramba kuripo kutya nezvekuti mupi wedu anozoona kwedu kunyora. Achanzwisisa meseji yedu zvakajeka here? Anozomutonga sei nekumupa zvinodiwa?
Nzira yaunonyora inoramba iri imwe yenzira dzekudzidza zvishoma nezvako. Uye izvi ndizvo zvinonyanya kuitirwa avo vanotanga ruzivo rwekunyora kutya. Maonero evamwe pane zvigadzirwa zvedu. Muchokwadi, ndicho chinhu chekutanga chinotinetsa, kupihwa kutya kwevanhu pasi rose kutongwa nevamwe, kuongororwa kana kushoropodzwa. Vangani vedu vanodudza iyo "isina peji peji" syndrome kuratidza zvipingamupinyi zvinotitadzisa kuwana mazano kana kurudziro? Pakupedzisira, chipingamupinyi ichi chinonyanya kutyisa kutya, kutya "kunyora zvakashata"; pakarepo, kutya uku kwekusaziva kuratidza kusakwana kwedu kuvaverengi.
VERENGA Chiyeuchidzo chehurukuro ye cybercourtoisie
Vazhinji ndeavo vakaratidzirwa nebasa ravo rechikoro. Kubva kuchikoro chepuraimari kusvika kusekondari, isu tese takatora chikamu mune zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa, tsananguro dzemavara, nezvimwe. Kunyora kwagara kuri pamwoyo pedzidzo yedu; zvinyorwa zvedu zvinowanzo verengwa, kururamiswa, uye dzimwe nguva kusekwa nevadzidzisi.
Kanganwa zvakapfuura kuti unyore zvakanaka
Sevanhu vakuru, tinowanzo kunzwa kutya uku kwekuverengwa. Kunyangwe zvichikosha kutiita kuti tiverenge, pamwe tinozviona zvakaoma kugadziriswa, kutaurwa nezvazvo, kuburitswa, kusekwa. Vanhu vachataurei nezvangu pandinoverenga zvinyorwa zvangu? Ndeupi mufananidzo wandichapa kune vaverengi? Zvakare, kana muverengi ari shefu wangu, ndingaitewo zvirinani kuti ndisazviburitse pachena uye kurega zvandiri. Aya ndiwo maitiro ekunyora anogona kutyisa kana uchishanda mukambani.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kunyora mubhizinesi kunotyisa kune vanhu vazhinji, pane mhinduro. Tinofanira "kungo" rega kunyora sekudzidziswa kuchikoro. Hongu, izvi zvinopesana zvachose, asi ichokwadi. Kunyora mubhizinesi hakunei nekunyora kwekunyora. Haufanire kunge uine tarenda. Kutanga, nyatsonzwisisa hunhu nematambudziko ekunyora kwenyanzvi, nzira uye humwe hunyanzvi, kunyanya kudzidzira. Iwe unongoda kupfuura nenzira iyi uye kunyora hakuchazokutyisidzi iwe.
Chii chinotsanangura kutya kunyora? Kurume 5th, 2021Tranquillus
pashureIta mari painternet mabhizinesi gumi ekutanga muna 10
zvinoteveraMwana anorwara: mushandi wako ane kodzero here kune mamwe mazuva chaiwo ezororo?
Hapachaita chikanganiso chimwechete chekupemha nenzira yeOrthodidact
Nzira yekukurumidza kugadzirisa spelling yemagwaro ako, kuwanikwa Antidote software.